Yakanakisa 304 316 Stainless Simbi Wedge Anchor Kuwedzera Bolts Nemutengo Wakanakisa Mugadziri uye Fekitori | Kuchenjera
Seimwe yeanchor bolts anowanzo shandiswa mumaketeni ekuvaka madziro, Wedge anchor bolts anowanzo kuve anozivikanwa zvigadzirwa, anonyanya kushandiswa kumisikidza kuburikidza-mhando zvinhu (senge michina, chiteshi simbi, gwara rairi, mabhureki, nezvimwewo).
Wedge anchor bolts, inozivikanwawo seyekugadzirisa mota geckos, ine akasiyana siyana mashandisirwo, anotangira kubva kumakanika michina kusvika kuvaka mabhiriji. Nekuda kwehukuru hwechimiro chayo, kuisirwa Wedge anchor bolts kwakasiyana nemamwe anchor bolts, saka hazvishamise kuti pane musiyano mukuru mukuomarara uye kusimba kweshear. Wedge anchor bolts akagadzwa nenongedzo yekukakavadzana kukuru pakati payo ese anchor bhaudhi uye gomba remadziro chigadzirwa kuburikidza nekuwedzera kweiyo chubhu. Inofananidzwa nemakemikari anchor bolts, simba reTensge anchor bolts rakaderera zvishoma.
Yeye yekudhonza-kunze bvunzo ye Wedge anchor bolts, yekutanga kufambisa inowanzo gadzirwa. Panguva ino, anchor bolt yasunungurwa zvishoma. Kazhinji, iko kwekutanga kusuduruka kweiyo Wedge anchor bhaudhi yeM12 ndeye 11-13KN, iyo inoratidzawo kudhonza simba re Wedge anchor bhaudhi. Simba rekuburitsa rakaderera, inenge 1/3 yeiyo yekemikari anchor. Mukuenzanisa, kumanikidza kwayo kuveura kwakafanana.
Kuenzanisa kwe Wedge anchor
(1) Maererano nesikuru dhayamita kupatsanura: kunyanya M8 × 60, M8 × 90, M10 × 100, M12 × 120, M16 × 140, M24 × 170. Uye zvakare, nekuti hapana chakakodzera nyika chiyero chakatemwa, kureba kwebhaudhi rekumashure kweiyo imwe sikuru dhayamita haina kufanana. Semuenzaniso, kana iko kudzika kwekusimbisa kweM10 Wedge anchor iri 70mm, iyo tsvimbo kureba inogona kuve 110mm, 120mm uye zvimwe zvakatemwa, uye zvakafananawo kune mamwe mamodheru.
(2) Kupatsanura zvinoenderana nekupfeka: kutonhora-kunyorera kwakasungwa wedhi anchor bhaudhi, hot-dip kwakakurudzira Wedge anchor bhaudhi, yazvino yekunamatira dhizaini inonyanya kuitirwa kabhoni simbi yezvinhu. Ukobvu hwesimbi yakakosha yeanopisa-dhizaini wedhi anchor bhaudhi ingangoita 50um, inova nguva yakapetwa ka3-5 yekutonhora-kunyorovesa rukoko. Nekuda kwemaitiro akasiyana, kutonhora kutonhora kunonetsa kuomesa kupfeka. Ehezve, iyo hupenyu hwehupenyu hweanopisa-dhizai zvigadzirwa zvakareba kupfuura izvo zvechando-dhiza zvigadzirwa.
(3) Yakarongedzwa nezvinhu: kabhoni simbi anchor bolts, isina simbi anchor bolts. Mabhaudhi esimbi anchor mabhaudhi anogona zvakare kukamurwa kuita 4.8 anchor bolts, 5.8 anchor anchor, 6.6 anchor anchor, uye 8.8 anchor anchor zvinoenderana nesimba ravo remuchina. Stainless simbi inogona kukamurwa kuita 304 uye 316 zvinhu, asi mutengo wayo unodhura. Kazhinji, kabhoni yesimbi anchor bolts anonyanya kushandiswa mumusika, uye kutonhora-kwakakurudzira zvakanyanya.
Pashure: China inogadzira yakakura saizi tambo hex musoro ivhu kongiri sikuruu chinotsigisa bhaudhi
Kuwedzera Anchor Bolt M12
Kuwedzera Bolt Mutengo
Kuwedzera Bolts M16
Kwakakurudzira Kuwedzera Anchors Bolts
Yakagadzirwa muChina Kuwedzera Chemical Anchor Bolt
Stainless Simbi Kuwedzera Bolts
Kuwedzera Kwekuwedzera Bolt
China inogadzira saizi yakakura tambo hex hea ...